မောင်ကျောက်ခဲ(မြန်မာပြည်): ဘင်္ဂလီကုလား-ရခိုင် အရေးပြီးတော့ ကုလား-ဗမာ အရေးစတော့မလား
အမိမြေအတွက် ကန့်လန့်ကောင်များအား ဒီနေရာမှာ ပါးစပ်ပေါက်တွေပိတ် ပေးနေပါသည်။ (သိတာပဲပြောမည် ၊ တတ်တာပဲပြောမည် ၊ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မပြောဘူး )
ဆက်သွယ်ရန် E-mail လိပ်စာ
အယ်ဒီတာ ထံသို့ အကြံပြု ဝေဖန်လိုလျှင်
► Aug 25 - Sep 1 (30)
► Aug 18 - Aug 25 (94)
► Aug 11 - Aug 18 (28)
▼ Feb 17 - Feb 24 (37)
လေယာဉ်မှူးသင်တန်းကို ပထမဆုံးအနေဖြင့် မြန်မာလေကြောင...
ကြည်မြင်တိုင် ကမ်းနားဘက်က ခိုးဝင်သူ ဘင်္ဂလီတွေ
ဗီယက်နမ် နိုင်ငံသည် ၎င်းတို့၏ ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တုများ...
တပ်မတော် အရာရှိတစ်ဦး ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော မြေသိမ်းမှုဆ...
ပုဂံညောင်ဦးတွင် နိုင်ငံခြားသားများအား လုယက်မှူဖြစ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမရှိ ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရ...
“မြန်မာနိုင်ငံတွင် သမိုင်းဝင်ကုလား သို့မဟုတ် ဘင်္ဂါလ...
မန်းတွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားများ ဖ...
ပြည်သူအချစ်တော် မသန်စွမ်းကျောင်းသူ မစုပုံချစ် သြစေ...
ပါကစ္စတန်အခြေစိုက် အစ္စလာမ်မစ်အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းမျ...
အစ္စလ်ာမစ် ဘာသာရေးထဲ လူငယ်တွေ အချစ်ရေးကို ခုတုံးလုပ...
ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုင်းပြည်ကို မျက်လှည့်ပြရန် အကြော...
ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခန့်အပ်မ...
မိမိမိုင်းမိမိနင်းမိ၍ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒဏ်ရာရ
ပုဂံမှာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ လုယက်ခံရ
မရိုးမသား သဘောထားနဲ့ အချောင်နိုက်ချင်တဲ့ ( ဗ.က.သ )...
2014 သန်းခေါင်စာရင်း လာမည့်လအတွင်း စမ်းသပ်ကောက်ခံမ...
သတိထားရမည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၏ လူဦးရေအဆမတန်ဖောင...
မန္တလေးတွင် တရားမ၀င် နေထိုင်သည့် မြန်မာစကား မတတ်သူမ...
၈၈မျိုးဆက်သစ်ကျာင်းသား ကိုကိုကြီးနှင့် ကိုဂျင်မီတိ...
ပျဉ်းမနား မြို့နယ်၌ ဦးခေါင်း နှစ်လုံးနှင့် ထူးဆန်း...
သာကေတမှာ ဗလီခိုးဆောက်နေတဲ့ ကုလားတွေက ပြည်သူနဲ့တာဝန...
ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသူများ SAT ရမှတ်မလိုပဲ အမေရိကန်ကျေ...
"အနာဂတ် ထာဝရ အလင်းရှင်"အမည်ရ မြန်မာပြည်၏ ပထမဆုံး ဒ...
သာကေတတွင်ဖြစ်ပွါးနေသော အာရဗီကျောင်း အား ပြည်သူများ...
ဘင်္ဂလီကုလား-ရခိုင် အရေးပြီးတော့ ကုလား-ဗမာ အရေးစတော့...
မျက်လုံးနှစ်လုံးကို တိုင်းပြည်အတွက် အစွန့်လွတ်ခံသွ...
ပေါက်တောမြို့နယ်သည် ထိုင်းတောင်ပိုင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ေ...
ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းပိုင်းပြတ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အလောင...
► Feb 10 - Feb 17 (26)
► Feb3- Feb 10 (20)
► Jan 20 - Jan 27 (17)
► Jan 13 - Jan 20 (25)
► 2012 (1538)
► Dec 30 - Jan6(40)
► Dec 23 - Dec 30 (24)
► Dec 16 - Dec 23 (24)
► Dec9- Dec 16 (55)
► Dec2- Dec9(66)
► Nov 25 - Dec2(76)
► Nov 18 - Nov 25 (71)
► Nov 11 - Nov 18 (99)
► Nov4- Nov 11 (89)
► Oct 21 - Oct 28 (77)
► Oct 14 - Oct 21 (18)
► Oct7- Oct 14 (26)
► Sep 30 - Oct7(58)
► Sep 23 - Sep 30 (16)
► Sep2- Sep9(26)
► Aug 26 - Sep2(23)
► Aug 19 - Aug 26 (28)
► Aug 12 - Aug 19 (24)
► Aug5- Aug 12 (22)
► Jun 10 - Jun 17 (100)
► Jun3- Jun 10 (60)
► May 27 - Jun3(20)
► Feb 12 - Feb 19 (17)
► Feb5- Feb 12 (14)
► Jan 15 - Jan 22 (14)
Video ဖိုင် (66)
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ
Home » ဘာသာရေး » ဘင်္ဂလီကုလား-ရခိုင် အရေးပြီးတော့ ကုလား-ဗမာ အရေးစတော့မလား
ဘင်္ဂလီကုလား-ရခိုင် အရေးပြီးတော့ ကုလား-ဗမာ အရေးစတော့မလား
ဘင်္ဂလီကုလား-ရခိုင် အရေးပြီးတော့ ကုလား-ဗမာ အရေးစတော့မလား မေးခွန်း သာကေတက မြန်မာမျိုးသမီးနဲ့ အာရဗီဘာသာစာသင်ကျောင်းတိတ်တဆိတ်ဖွင့်ထားတဲ့ကုလားမ ရန်ဖြစ်ရာက မွတ်ဆလင်ကုလားမရဲ့ ဗမာသူတောင်းစားပြောတဲ့စကားလုံးကြောင့် ပြဿနာကြီးလာပါပြီ ။သာကေတ မာန်ပြေ(၁၉)လမ်း အနောက်မှာ မူစလင်ကုလားအိမ်တစ်အိမ်မှ အာရဗီစာသင်ကျောင်းသို့တဖြေးဖြေးပြောင်းလဲနေပါတယ် . . ဒီနေ့ အဲ့ဒီ့အိမ်မှ မူစလင်ကုလားမနှင့်ရပ်ကွက်ထဲမှ မြန်မာအမျိုးသမီးများစကားများရာတွင် ထိုမူစလင်ကုလားမမှ "ငါတို့ပိုက်ဆံတတ်နိုင်လို့ ငါတို့ဆောက်တာ
နင်တို့ဗမာသူတောင်းစားတွေက ဘာတွေမနာလိုဖြစ်နေတာလဲ" ဟု စတင်ပြောဆိုရာမှ ပြဿနာဖြစ်ကာ ယခုအခါ ထိုအာရဗီကျောင်းအား သာကေတနေမြန်မာများမှ ၀ိုင်းဝန်းဖြိုဖျက်နေကြောင်းသတင်းရထားပါတယ် .. ယခုအချိန်ထိ ပြဿနာမပြီးဆုံးသေးပါဘူး .။
သာကေတ မြို့နယ် မာန်ပြေ (၁၈/၁၉) လမ်းကြား၌ ဗလီ ဆောက်လုပ်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံ ပြည်သူများ နှင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွား နေသည်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်း က တွေ့ရစဉ်
From:[_ လူထု မောင်ကာဠု _]
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 5:30 PM
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = ဆင်ခြင်နိုင်ကြစေ, ဘာသာရေး
17 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ်:
2/17/13, 7:27 PM
2/17/13, 8:45 PM
GE ကရဲဘော်တွေ ဝိုင်းကူကြပါ dynamite , C4 ကို သုံးပါ
2/17/13, 8:48 PM
2/17/13, 10:40 PM
ကုလားသန်းနိုင်ဟာ သူ့ညီမ အဆိုတော်ပုလဲကို သူပြန်ယူထားသူဖြစ်ပါတယ်
တေးသံရှင် ပလေးဘွိုင် ဦးသန်းနိုင်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်အမှန်....။
အမှန်တရား အတိုင်းတော့ပြောပြချင်တယ်။ ကျွန်တော်အရပ်သားပါ။ ကျွန်တော်တို့က (၉)မ်ိုင် ဂေါ့ကလပ်မှာ အမြဲရိုက်ပါတယ်။
ရဲချုပ်ဗိုလ်မှုကြီးစိုးဝင်း က သက်တမ်း(၂) ခါ့တိတိအရွေးချယ်ခံရတဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားမျှတစွာ စီမံခန့်ခွဲတတ်ပြီး ဂေါက်ကွင်းသာယာ လှပရေး ဂေါက်လာရိုက်သူများကိုလည်း အဆင်ပြေပျော်ရွင်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေေးနတဲ့ လူကြီးလူကောင်းတယောက်ပါ ။
အဲဒီနေ့ က အဖြစ်အပျက်ကို အစအဆုံးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အခုလို မတရား စော်ကားပြီး အောက်တန်းကျစွာ နဲ့ ပြောဆိုစွပ်စွဲထားတဲ့ ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင်ရဲ့ စကားတွေ နဲ့ တဖက်သတ်တော့ မစွပ်စွဲမရေးသင့်ပါဘူးဗျာ ။
ဥက္ကဌ ဖလား ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ နဲ့ ညစာစားပွဲ ဆုပေးပွဲ လုပ်တာပါ ။ လူပေါင်း (၂၄၀)လောက်ပျော်ရွင်စွာ ပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့ကျပါတယ်။ ဂေါက်ကွင်းဥက္ကဌကြီး ကိုယ်တိုင်က ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင် နဲ့ အမျိုးတော် တဲ့ အလုပ်အမှု့ဆောင်အဖွဲ့ဝင် ကိုအယ်ဒီ (ခ) ကိုတင်အောင်မိုးကို တီးဝိုင်းလေးနဲ့ အားလုံးပျော်ရွင်ရအောင်စီမံပြီး ခေါ်ခိုင်းခဲ့တာပါ ။ ဒီအခါ့မှာ ကိုပက်ထရစ်ကိုကိုလေး တို့လဲ လာရောက် ဖျော်ဖြေကျပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါ့မှာ ကိုသန်းနိုင် ကမိုက်ကို ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ယူပြီးမလွတ်တမ်းဆိုပါတယ်။ ဒီနောက် မန်ဘာလူငယ်လေးတစ်ဦး(၀င်းမ်ိုးအောင်)က ဥက္ကဌ ကို ကျွန်တော် ရှမ်းသီချင်းဆိုပြီးကချင်တယ်လို့ ခွင့်တောင်းသံကြားလိုက်မိပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဥက္ကဌကြီးက ကိုအယ်ဒီ( တီးဝိုင်းစီစဉ်သူ ကိုသန်းနိုင်ရဲ့ အမျိုး)ကို ပြောပေးတာသိလိုက်ရပြိး ကိုအယ်ဒီက စင်ပေါ်တက်သွားပြီး ပြောပြတာလဲတွေ့ရပါတယ်။
နောက် ကိုသန်းနိုင်ကစင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာပြီး သိပ်မကြာပါဘူးဗျာ ဇာတိစရိုက်ပြတော့တာပါပဲ ။ လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ FM မိုက်နဲ့ *Captain ကို "လီး" ပဲ" လီး" ပဲ လို့ အကြိမ်ရေများစွာ ဆဲဆို သောင်းကျန်းပါတော့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဂေါက်သီးရိုက်အဖွဲ့ချုပ်က ဦးချမ်းဟန်တို့လို လူကြီးလူကောင်းတွေလဲရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မျက်မြင်ပါပဲ ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင်က ရိုင်းစိုင်းစွာ ဆဲဆိုပြိးသောင်းကျန်းနေတော့ မခံရပ်နိုင်သူ ဘေးမှ လူငယ်တချို့ ကရိုက်မယ် ဖြစ်လာတော့ ဥက္ကဌ ဦးစိုးဝင်းကတားဆီးထားပေးတာပါ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ဂေါက်ပွဲတိုင်း လုံခြုံရေးလာပေးတဲ့ မရမ်းကုန်းရဲစခန်းက တာဝန်ရှိသူကရောက်လာပြီး ဆဲရဲတိုင်းထွာဆူပူအော်ဟစ်အများပြည်သူကို နှောက်ယှက်မှု့နဲ့ ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင်ကိုအမှု့ဖွင့်ခဲ့တာပါ။ ဥက္ကဌ ဦစိုးဝင်းတောင် အဲဒီ ရဲနဲ့စကားပြောတာ မတွေ့လိုက်ရပါဘူး။ အခုအခါ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ကြားသိသလောက်သတင်းအရ ဥက္ကဌဦးစိုးဝင်းကို အိမ်လာခွင့်တောင်းပြီး တောင်းပန်မယ် အမှု့ပိတ်ပေးပါလို့ကြားထားပါတယ်။ ဒီနေ့ (၉)မိုင်ဂေါက်ကွင်းမှာ အဲဒီကိစ္စဖြစ်ရပ်မှန်ကို ညနေ(၃)နာရီမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ ကိုသန်းနိုင်လဲတက်ရောက်မယ်လို့ကြားထားတယ်။ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကို မသိပဲ သတင်းရေးသူုအနေနဲ့ တဖက်သတ်မရေးသင့်ပါဘူးဗျာ ။ နစ်နာပါတယ် ကျွန်တော်တို့က ဂေါက်ကွင်းကျမှ ရဲချုပ်ဦးစိုးဝင်းကို တွေ့ဖူးတာပါ ။ ဂေါက်ကွင်းစည်ပင်သာယာလှပရေးတွေလုပ်ဆောင်ပေးတယ် လူကြီးလူကောင်းပီသတယ်။ စေတနာထားတတ်တယ် ဒါကြောင့် အဖြစ်မှန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာလို့လဲရပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို တဖက်သတ် ရေးတဲ့ ကိုမျိုးချစ်မြန်မာ အနေနဲ့ သေချာမလေ့လာမဆန်းစစ်ပဲမရေးသင့်ပါဘူး။ သတင်းတခုကို မခိုင်လုံပဲ တဖက်သတ်ပြောသလို ရေးတဲ့အခါ့မှာ သူတဖက်သားနစ်နာစေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ရှိတဲ့သူတွေကို မေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်ကျပေ့ါဗျာ ။ လူစုံရှိတာပါ။ ပလေးဘွိုင်သန်းနိုင် အနေနဲ့ လူကြီးလူကောင်းပီသစွာ ပြောဆိုခဲ့မယ် ဆဲရေးမတိုင်းထွာခဲ့သင့်ပါဘူး။ သေချာမသိပဲ ပိုစ်ရေးတင် ကျန်တဲ့လူတွေက ၀ိုင်းဆဲနေကျလို့ မနေနိုင်လို့ ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲတာပါပဲ..။
ကို Zaw Mintun Zawmintun ၏ မူရင်းပို့စ်မှ Comment ရေးသူ ကို Min Yannaing ၏ ရှင်းလင်းတင်ပြချက်အား မူရင်းအတိုင်း မျှဝေပါသည်။ ။
2/20/13, 5:52 PM
2/20/13, 10:02 PM
ဗမာတွေ အနေနဲ့ ဘုန်းဘုန်းကြီးများပြောသလို ဘာသာရေးအရရော လူမူ့ရေး အရရော စည်းလုံးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ခုလောလောဆယ်မှာကိုဘဲ ဗမာမလေးများဟာ ကုလားတွေနဲ့ တွဲနေတာကို တွေ့နေရပါတယ် မိဘများအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်သားသမီးနဲ့ ရည်ငံနေသူဟာ ကိုယ့်လူမျိုးမှ ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာကိုတော့ သိနေသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် အခုဆိုရင် ကုလားများဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြို့တိုင်းမှာကို ကျွန်မတို့အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စော်ကားနေတာကို သိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် စီးပွားရေးမှာလဲထိုအတိုင်းပါဘဲ 786 ဆိုသောဆိုင်များကို ရှောင်ကြင်ပြီး ဗမာဆိုင်မှာသာ အားပေးကြပါလို့ အားလုံးသော ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များကို တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်
3/20/13, 9:06 PM
ရခိုင်တွေနဲ့ဘာဆိုင်လည်းကွ မင်းတို့ကုလားတွေမရှိသင့်တာ မင်းတို့နိုင်ငံပြန်ပါလားကွာခွေးလီးခွံစောင်းတဲ့ကုလားတွေ
တရားမ၀င် မှိုလိုပေါက်နေတဲ့ ဒီဗလီတွေ
4/9/13, 1:36 PM
မနာလိုနေတာ သိသာပါတယ် အပေါ်ကအကို ရှင်းပြမနေနဲ့ လက်ညောင်းတာပဲအဖတ်တင်မယ် ဒီဗမာကောင်တွေ ဦးနှောက်မရှိကြဘူး (.....,)ကို ပလာတာကျွေးသလိုပဲ နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး သူတို့က C4 လောက်ပဲသိတာ ကျတော်တို့ ဂျိဟာဒ်အကြောင်းသိမှာမဟုတ်ဘူး
4/13/13, 3:27 PM
kyaw wunna said...
4/17/13, 6:58 PM
ဒါကြောင့် ကုလားဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသင့်ဘူး။
5/21/13, 8:10 AM
ဟေ့ ကောင် ငါလိုးမကုလားတွေ မင်းအမေလင်နိုင်ငံမင်းတို.ပြန်ကြစမ်းပါကွာ
6/14/13, 9:13 PM
6/22/13, 10:28 PM
Ko Thet said...
8/28/13, 8:52 AM
မိတ်ဆွေတို့ ၏ ဆွေးနွေးမူ ဝေဖန်မူ အား လိူက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။
သင်တို့၏ ဝေဖန် အကြံပေးမှူတို့အား ဖော်ပြခွင့်ရရန် ခေတ္တ စောင့်ဆိုင်းပါ ။
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်၏ ဥရောပပြန်ခရီးစဉ်အား ကြိုဆိုခဲ့ကြပုံများ
ဦးသိန်းစိန် အားဤသို့ကြိုဆိုခဲ့ကြ ကြိုဆိုသူများနဲ့ အင်တာဗျူး
တပ်မ၄၄+KNLAတပ်မ၁နဲ့သရုပ်ဆောင်တို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဘောလုံးပွဲ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းနှင့်ကေအိုင်အိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ
အံဖွယ်၃နှစ်ကလေးရဲ့မွေးရာပါ ပါရမီ မြန်မာ့သိုင်းအစွမ်း
88 ခေါင်းဆောင်တွေ ဒီလိုနည်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ် ပြောင်ကြီးဘာလို့ထောင်ကျ
ဤကွပ်လပ်တွင် လိုချင်တာရေး၍ ရှာပါ
မင်းသား ရဲတိုက် ၏ SEX ဗီဒီယိုဖိုင် များ ထွက်ရှိလာ
ရခိုင် ကုလား အဓိကရုန်းအပြီးတွင် ဘာသာပြောင်းခဲ့သော မင်းသား ရဲတိုက်အနေနဲ့ ယခုအခါ အနုပညာ ရပ်ဝန်းတွင်ပျောက်နေရာမှာ ယခုအခါ Sex ဗီဒီယိုဖိုင်မျာ...
မျိုးဆက်သစ်များ အတုမယူသင့်သည့် ဗိုလ်မှူး သမီး၊ ဗိုလ်မှူးကြီး သမီး နှင့် ဗိုလ်ချုပ်သမီး ၃ ဦး
လက်တလော အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဗြောင်းဆန် သွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းကတော့ ဗိုလ်မှူးစိုးမြင့် ရဲ့ သမီး စိုးမြတ်သူဇာ နဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး ကိုကိုရဲ့ သမီး နဝရ...
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပျောက်ဆုံးနေသူ ဆက်သွယ်ပါ
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တစ်ခု ၁၉ လမ်း ပေါ်တွင်ကောက်ရထားပါတယ် . . . နာမည်က ဖြူစင်အေးခိုင်နာမည်နဲ့ပါ . . . သက်တမ်း(၅)နှစ်ကျန်ရှိသေးပါတယ် . . .ကာယကံ...
ဇန်နဝါရီလ၇ရက် နေ့ က နန့်ဆန်းယန် ဘုရားကျောင်းတွင်စစ်ဘေးရှောင်နေသော ကျောင်းသူတစ်ဦးအား KIAမှလူမဆန်စွာအုပ်စုဖွဲ့ မုဒိန်းကျင့်ခဲ့ကြောင်းနန့် ဆန...
သက်မွန်မြင့် သရုပ်ဆောင်ရန် ငြင်းပယ်ခဲ့သော sexy အနမ်း ဇာတ်ဝင်ခန်းအား ဖွေးဖွေး သရုပ်ဆောင်မည်
sexy လိင်အသားပေး နှူတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ်နမ်းပြီးနောက် မင်းသား ရင်အုံကိုဆက်နမ်း ရမည့် ဇတ်ဝင်ခန်းကို မရိုင်နိုင်သောကြောင့် နှုတ်ထွက်သွားသော သက...
ဒီရက်ပိုင်းနာမည်ကြီးလျှက်ရှိသော မင်းသားမင်းသမီးများ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးမှုသတင်းများကို သမီးငယ်မှ ပြောပြ၍ သိရှိရသည့်အတွက် ထိုဆောင်းပါးရှင်ဖြစ်...
၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ အား မြန်မာဟက်ကာတစ်ဖွဲ့မှ သိမ်းပိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့
မြန်မာ ဟက်ကာ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သော BHG အဖွဲ့မှ ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းများခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ တစ်ခုဖြစ်သော www.kokogyi.me ...
တပ်မတော်မှ ကေအိုင်အေ အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူ များ၏ စခန်း ပွိုင့် ၇၇၁ကို တက်ရောက် သိမ်းပိုက်စဉ် သိမ်းဆည်း ရမိသည့် လက်နက် ခဲယမ်းများ၏ မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
ပွိုင့် ၇၇ ၁ စခန်းအား စစ်တပ်မှ ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီး ကေအိုင်အေသူပုန်များထံမှ သိမ်းမိသော စစ်လက်နက်များ တပ်မတော်သည် ထာဝ...
မြန်မာ့တပ်မတော်ထုတ် လက်နက်ငယ်များ ပုံစံသစ်ဖြင့်ထွက်ရှိလာ
From:.http://mmarmysnipernote.blogspot.com/ ယခင်က အစ္စရေးတပ်မတော်သုံး galil rifle များကို အတုယူပြီးထုတ်လုပ်သည်ဟု ပြောဆိုနေသော မြန်မာ့တပ်မေ...
အနမ်း နဲ့ ကျန်းမာရေး
၁။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နမ်းနေကြတဲ့အခါ ချစ်သူစုံတွဲ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့သွေးကြောတွေဟာ ပြန့်ကားသွားပြီးသွေးခုန်နှုန်းကိုလည်းမြန်လာစေပါတယ်။ဒါ့ကြော...
မြန်မာမ လေး ထမီမဝတ်တော့ဘူး .အဖော်အချွတ်မယ် လုပ်နေပြီ
မျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်နဲ့ ယဉ်ကျေးမှု့ အမွေအနှစ်တွေထိန်းသိမ်းတာလား ရောမရောက်လို့ ရောမလိုကျင့်တာလားတော့မသိတော့ပါဘူး တွံတေး သိန်းတန် ဆိုထားတဲ့ သ...
ဟိုမွှေဒီမွှေ လုပ်ရင်းနဲ့ စာအုပ် တွေ ဖတ်ချင်သူများအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် Websites ကလေးတွေတွေ့လို့ပြန် ပြီးတော့ မျှလိုက်ပါတယ်.. မြန်မာ ဆိုဒ်တော့မဟ...
မလေးရှားတွင် မုဒိမ်းကျင့်ခံရသူနှင့် အတူနေသည့် မြန်မာ အမျိုးသမီးများအတွက် လုံခြုံရေး ချထား
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၂၀ မလေးရှားနိုင်ငံ ဂျိုဟိုးပြည်နယ်တွင် မုဒိမ်းကျင့်ခံခဲ့ရသည့် မြန်မာ အမျိုးသမီးနှင့် အတူ နေထိုင်သည့် အမျိုးသမီး အလုပ်သမာ...
မြန်မာအမျိုးသမီး ဝတ်စုံသည် SEXY DRESS မဟုတ်..စပွန်ဆာ ရှာရန် မဟုတ်..ဖော်ချွတ်ကဏ္ဍအတွက်မဟုတ်.အမျိုးဂုဏ်အတွက်ဖြစ်သည်
မင်းသမီးများခင်ဗျာ.. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ top SEXY ထဲမှာ top ၁၀ ဝင်ခင်သူ များအနေနဲ့ အမျိုးသား ကာလသားအကြိုက် ဦးဦး ကိုကို အကြိုက် မဒမ်ဘာသာ ကြိ...
ဦးခင်ညွှန့် ဦးသိန်းညွှန့် ဦးကိုကိုကြီး ဒေါက်တာအေးမောင် နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်တို့အား နိုင်ငံတကာခုံရုံပို့မည်ဟူသော ခြိန်းခြောက်စာများ ပေးပို့ခြင်းခံရ